ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင် China Manufacturers & Suppliers & Factory
ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 13 များအတွက်စုစုပေါင်း ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင် ထုတ်ကုန်များ)
ကြေးဝါ Mini ကိုဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်
အမှတ်တံဆိပ်: Kingsir, OEM
ကြေးဝါ Mini ကိုအဆို့ရှင် ART.8645 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အဆို့ရှင် အရွယ်အစား: 1 / 2â€ ?? X3 / 8â€ ?? 1/2a € ?? X5 / 16â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
ပိုက် Union နှင့်အတူကြေးဝါ Mini ကိုအဆို့ရှင်
ပိုက် Union နှင့်အတူကြေးဝါ Mini ကိုအဆို့ရှင် ART.8646 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး ပိုက်နှင့်အတူအဆို့ရှင် ပြည်ထောင်စု အရွယ်အစား: ၅/၈ ?? X3 / 8â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT...
ကြေးဝါ Mini Mini ကိုအဆို့ရှင်ဓာတ်ငွေ့အသုံးပြုမှု
ကြေးဝါ Mini ကိုအဆို့ရှင် ART.8650 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အဆို့ရှင် အရွယ်အစား: 1 / 2â€ ?? X3 / 8â€ ?? 1/2 €€ X5 / 8â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
ကြေးဝါအသေးစားဘောလုံးအဆို့ရှင်နီကယ်ချယ်ထားသည် ART.8653 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အဆို့ရှင် နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1 /4â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
ကြေးဝါအသေးစားဘောလုံးအဆို့ရှင်နီကယ်ချယ်ထားသည် ART.8654 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အဆို့ရှင် နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1 / 2â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
ကြေးဝါအသေးစားဘောလုံးအဆို့ရှင်နီကယ်ချယ်ထားသည် ART.8655 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အဆို့ရှင် နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1 / 4â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
ကြေးဝါ Mini ကိုအဆို့ရှင်
ကြေးဝါ Mini ကိုအဆို့ရှင် ART.8659 ကြေးဝါ Mini ကိုဘောလုံး အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 chrome တွင်ဖော်ပြထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4. သံမဏိလီဗာလက်ကိုင်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း။ 5. အပူချိန် -20 ဒီဂရီမှ 180...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မမှစ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ Nomial ဖိအားသောကြေးဝါကိုယ်ထည်: 2.0 mpa အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် စင်ပြိုင် Thread Cnform T0 က ISO-228-1: 2000 သင့်လျော်သောအလတ်စား - ရေ၊ ရေငန်မဟုတ်သောအရည်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောရေနွေးငွေ့...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ အမည်ခံဖိအား: 16 bar မှ 25 bar မှ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် သင့်လျော်သောအလတ်စား - ရေ၊...
အရွယ်အစား: ၁ / ၂ လက်မမှ ၁ လက်မအထိ ပစ္စည်း: ပလပ်စတစ် အလုပ်လုပ်နေသော tempereture: -20 ဒီဂရီကနေ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား: 16 bar မှ 25 bar...
အရွယ်အစား: ၁ / ၂ လက်မမှ ၁ လက်မအထိ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား: 16 bar မှ 25 bar...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည်။ အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား:6bar မှ 10 bar...
အရွယ်အစား: 1/2 လက်မ ပစ္စည်း: ကြေးဝါ အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - -20 ဒီဂရီမှ 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည် အလုပ်လုပ်နေသောဖိအား:6bar မှ 10 bar...
ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင် ဂိတ်သုတ်အဆို့ရှင် ဓာတ်ငွေ့တံခါးအဆို့ရှင် အသက်ရှည်အဆို့ရှင် ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်ကြေးဝါ ရေတံခါးအဆို့ရှင် ပွတ်ထောင့်အဆို့ရှင်